Chiziviso Chemakambani Predictive Solutions inopa zvigadzirwa zve software software yeanopluic analytics. Izvo zvigadzirwa zvekambani zvinoshandiswa kuita fungidziro nekuongorora iripo data. Mucherechedzo wekambani - zvikamu zvedenderedzwa - yakafanana pie-machati emifananidzo uye zvakare yakaomeswa uye yakareruka chifananidzo cheziso mune chimiro. Iyo brand platform "inodurura mwenje" mutyairi kune ese brand brand. Dzese dziri kuchinja, dzinobata mvura mafomu uye thematical yakareruka mifananidzo inoshandiswa seyakawedzera mifananidzo pane akasiyana maficha.
Muvhuro 24 Chivabvu 2021
Chiziviso Chemakambani Glazov fekitori yemidziyo mutaundi rine zita rimwe chete. Iyo fekitori inogadzira fenicha isingadhuri. Sezvo kugadzirwa kwefenicha yakadaro kuri kwakajairika, zvakatemwa kuseta pfungwa yekutaurirana pane yekutanga "matanda" 3D mavara, mazwi anoumbwa nemavara akadaro anomiririra fenicha seti. Tsamba dzinogadzira mazwi "fenicha", "imba yekurara" nezvimwe kana mazita ekuunganidza, akaiswa muchimiro kuti afanane nezvimedu zvemidziyo. Yakatsanangurwa 3D-mavara yakafanana nemisikesheni yemafenicha uye inogona kushandiswa pane stationery kana pamusoro pemifananidzo yekumashure yekuzivikanwa chiratidzo.
Typeface Redcript Pro ndiyo yakasarudzika font yakafuridzirwa nehunyanzvi matekinoroji uye magajeji kune dzimwe nzira dzekukurukurirana, zvakabatana kutisanganisa nesu nemahara tsamba-mafomu. Yakafuridzirwa neIpidha uye yakagadzirwa muBrashes, inoratidzwa mune yakasarudzika yekunyora maitiro. Iine chiRungu, chiGreekese pamwe neiyo alfabheti yechiCyrillic uye inotsigira mumitauro inopfuura makumi manomwe.
Mugovera 22 Chivabvu 2021
Visual Art Rudo rwemhando yechimiro chirongwa chemavara ezvinyorwa zvinosanganisira kuda nekuremekedza zvakasikwa, kune zvese zvipenyu. Pane pendi yega yega Gabriela Delgado anoisa kusimbiswa peruvara, achisarudza zvine hungwaru zvinhu zvinobatana nekuenderana kuti uwane kupera asi usina kupera. Iyo yekutsvagurudza uye rudo rwake chairwo rwekugadzira runopa iyo intuitive kugona kugadzira mavara ane mavara emavara ane mavara ezvinhu kubva kune akanaka kusvika kunekuchenjera. Tsika yake uye zvaakasangana nazvo pachako zvinoumba iwo manyorerwo kuve akasiyana eakaratidzwa nhoroondo, izvo zvichave zvichishongedza chero mamiriro ezvinhu neakasikwa uye kufara.
Chishanu 21 Chivabvu 2021
Photoinstallation Muchivakwa chemuenzaniso ndinoda kupa pfungwa dzakatenderedza chokwadi, kuti isu tifunge nezvedu uye titarise sechiyero kune chiitiko chinofungidzirwa. Chiitiko nechisikigo dzimwe nguva uye chinoparara. Chii chiri shure kwayo kana chii chichaitika kana iyo yekushongedza mafuru inogona kunge isiri kuuya apocalypse asi iko kusikwa kwechinhu chitsva. Mumwe mufananidzo we izvo zvinogona kuitika kana iyo showin yatopera.
Gamsei Jongwe Barha Chishanu 18 Chikumi
Aix Arome Cafe Cafe China 17 Chikumi
Wuhan Pixel Box Cinema Cinema Chitatu 16 Chikumi
Chiziviso Chemakambani Chiziviso Chemakambani Typeface Visual Art Riini Photoinstallation